Archive du 03-mai-2022
Marc Ravalomanana "Sahia, mandresy no toromarika"
Nanakoako tany amin’ny Faritra Alaotra ny “Ka sahia handeha hiara-dia aza kanosa fa avia, Ravalomanana hitondra antsika a! Mandroso ny toromarika”, hira fanevan’ny Antoko Tiako I Madagasikara ny faran’ny herinandro teo.
Mafana ny ringa politika
Ankatoky ny fifidianana tanteraka isika amin’izao fotoana izao. Sarotra ny fandidiana, ary efa tena miezaka maneho ny heriny ara-politika ireo sokajiana ho hery lehibe eto amin’ny tany sy ny fanjakana.
Taom-baovaon’Imerina Fotoan-dehibe ny teny Anosimanjaka
Ambohipihaonan’ny Zanadranavalona Anosimanjaka ny 01 aprily teo, izay nankalazan’ny fikambanana ny Taombaovaon'Imerina 447, taorian’ny fiatoana roa taona noho ny hamehana ara-pahasalamana.
Siteny Randrianasoloniaiko Avereno ireo « dojo » noravaina tao Mahamasina
« Mila averina malaky ny « dojo » noravaina rehetra ao Mahamasina, araka ny fanehoan-kevitry ny Filohan’ny Komity Olaimpika Malagasy (COM) Atoa Siteny Randrianasoloniaiko ny faran’ny herinandro teo.
Rugby-Ekipam-pirenena vehivavy Tafita amin’ny fiadiana ny tompondaka eran-tany
Nanoratra tantara indray ny rugby Malagasy. Tafita any amin’ny fiadiana izay ho tompondaka eran-tany ny ekipam-pirenena sokajy vehivavy,
Faneva Ima «Mbola maro ny zavatra tena mila ovaina »
Misaotra betsaka azy 10 mianadahy nahita marimaritra iraisana momba ny ekipam-pirenetsika sy ny fandaminana ao anatin’ny FMF, hoy ny kapitenin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra teo aloha,
Mananara Avaratra Tratra ireo mpisoloky amin'ny alalan'ny kalanoro
Lehilahy dimy no nosamborin'ny polisy tao Mananara Avaratra, rehefa fantatra fa tompon’andraikitra amin'ny fisolokiana olona, amin'ny alalan'ny fampitomboana vola.
Tsy ampy ny fanazavana Manjavozavo ilay resaka fampiakarana karama
Ny takarivan’ny fetin’ny asa ny 01 mey 2022 teo no nanaovan’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina fanambarana ny hampiakarana ny karaman’ny mpiasam-panjakana sy ny sehatra tsy miankina,
Zaza Ramandimbiarison “Fanapahan-kevitra mahery vaika no andrasana amin’ny Filoha”
Tonga ity ny fetin’ny asa, hoy ny praiminisitra lefitra teo aloha, Zaza Ramandimbiarison. Tsy mba mandray karama isam-bolana ny any Ambanivohitra rehetra any, hoy izy.
FJKM Imerinkasinina Fanasina Fotoan-dehibe ny alahady 08 mey izao
Fotoan-dehibe ho an’ny mpianakavin’ny Finoana ny any amin’ny FJKM Imerinkasinina Fanasina ny alahady 08 mey ho avy izao.
Mathyas Randriamamy Naneho ny alahelony tamin’ny fahalasan’i Raiola
Nodimandry ny sabotsy teo teo amin’ny faha 55 taonany ilay mpisera mpilalao baolina kitra na “agent de joueur” isany sangany maneran-tany, Carmine Raiola, fantatra amin’ny hoe Mino Raiola.
Ady amin’ny doro tanety Nametraka aro afo tao Firarazana ny Ministeran’ny tontolo iainana
Laharam-pahamehan’ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy ny ady amin’ny doro tanety sy ny doro ala ka efa manomana sahady ny fiatrehana izany tompon’andraikitra isan’ambaratongany ny eo anivon’ny
Vehivavy Tiako I Madagasikara Nikarakara fizaham-pahasalamana maimaimpoana
Ny tanjon' ny Vehivavy Tiako I Madagasikara ao anatin'ny tetikasa «Vehivavy mendrika, vehivavy mamiratra ho an' i Madagasikara» dia hanasoa ireo mpiara-belona,
Antoko politika Fiombonana “Tsy mba nianatra politika izay mpitondra teo”
Nambara tamin’ny fomba ofisialy tetsy amin’ny hotely Tometal Mahamasina ny sabotsy teo ny fitsanganan’ny antoko politika vaovao antsoina hoe “Fiombonana” izay tarihin’ny filohany, Jocelyn Abel Ralison.
Ambohibao-Antehiroka Nahazo toeram-pitsaboana manara-penitra
Ho famaliana ny hetahetan'ny vahoaka eny ifotony sy ho fanatanterahana ilay teny filamatra manao hoe : Fahasalamana ho an'ny daholobe tsy anavahana sokajin-taona dia "maternité" sy "dentisterie"
Mirado Rakotoharimalala “Tadidio fa bonus ihany ny baolina kitra”
Afaka 1 volana katroka, izany hoe ny 30 may 2022, dia hiditra amin'ny “fenêtre FIFA” isika, hoy ny mpamakafaka ara-panatanjahantena, Mirado Rakotoharimalala, ny sabotsy teo,
Ambohibao Antehiroka « Vernis à ongles » no nampiasaina nanaovana vola sandoka
Mpivady sy vehivavy iray izany hoe : olona 3 no tratra nampiasa sady manamboatra vola sandoka, teny Ambohibao Antehiroka teny ny faran’ny herinandro.
Andasibe Latsaka tany anaty rano ilay fiara 4×4
Fiara tsy mahato-dàlana iray no latsaka tao anaty rano, ny Alahady nifoha omaly alatsinainy teo.Tany Andasibe
Rajoelina sy ny Kopikoleany Sao dia efa taratry ny “doublon” sahady ?
Noraisin’ny filoha am-perinasa Andry Rajoelina ho teboka miabo ho azy, ary nampiasaina atamin’ny famoriam-bahoaka miendrika fampisehoana tany Morondava ny fisehoana imasom-bahoaka nataon’ny
Andranomandevy Antsirabe Maty voatifitra teo amin’ny tratrany ilay jiolahy nikoizana
Lehilahy iray no lavon’ny balan’ny Polisin’ny UIR ao Antsirabe ary iray kosa azo sambo-belona ny 01 mey lasa teo tokony ho tamin’ny 06ora hariva teny Andranomandevy noho ny fandrahonana ho faty.